ဒါဟာသင်ဆုကြေးဇူးကိုထုပ်ပိုးပြီးအပါအဝင်စီမံကိန်းများကိုအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကြော့စကျင်ကျောက်စက္ကူ, အောင်စူပါလွယ်ကူပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုသင်သိမည်မဟုတ်ပါသင်သည်စကျင်ကျောက်ကနေစဉ်အတွင်းသင့်စက္ကူရနံ့နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဤစီမံကိနျးအတှကျမဆိုစက္ကူကိုသုံးနိုင်သည်နှင့်သင့်ရွေးချယ်ရေးပေါ် မူတည်. အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအရပါလိမ့်မယ်။
ငါသာမန်ပရင်တာစက္ကူကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်လည်းမရိတ်မုန့်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါဖြစ်ကောင်းသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အနည်းဆုံးစျေးကြီးအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ရည်ရွယ်သော်လည်း, အဘယျသို့ငါအမှန်တကယ်အသုံးပြုခဲ့ဂျယ် shaving ဆှတျဖနျြးခဲ့သည်။ သငျသညျ Peppermint-ဆှတျဖနျြးရိတ်မုန့်ကိုသုံးပါလျှင်သင်သကြားလုံးကြံတူသောအနံ့ကြောင့်စက္ကူစေနိုင်သည်။ သငျသညျပန်းရနံ့ရိတ်မုန့်ကိုသုံးပါလျှင်သင့်ရဲ့စကျင်ကျောက်စက္ကူတစ်သိမ်မွေ့ပန်းအမွှေးအကြိုင်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
ဤစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုသည်အခြားပစ္စည်းခြယ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်မှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲတွင်အပြာ / အနီ / အစိမ်းရောင် box ကိုအစားအစာအရောင်ကို အသုံးပြု. ရောင်စုံစကျင်ကျောက်စက္ကူနှင့်အတူပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါပန်းရောင် / လိမ္မော်ရောင် / အပြာသေတ္တာစိတ်ထားပိုစတာသုတ်ဆေးနှင့်အတူရောင်စုံခဲ့ကွောငျးစကျင်ကျောက်စက္ကူနှင့်အတူပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုခြယ်ပစ္စည်းကိုသုံးပါ, ဒါဖန်တီးမှုဖြစ်နိုငျပါသညျ!
ဒယ်အိုး၏အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့မုတ်ဆိတ်ရိတ်၏ပါးလွှာသောအလွှာကိုပြန့်နှံ့။ ငါသည်တဇွန်းကိုသုံးပေမယ့်သင်တစ်ဦးဓါးသို့မဟုတ် spatula သို့မဟုတ်သင့်လက်ချောင်းများကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်အားလုံးသည်တစ်ဦးရေတိမ်ပိုင်းအပေါ်ယံပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်များပုံစံရန်သင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသုံးပါ။ ငါရိုးရှင်းစွာတစ်လှိုင်းအတက်အကျဖက်ရှင်အတွက်အရောင်များမှတဆင့်တစ်ခက်ရင်းခွများţineသို့ပွေးလေ၏။ သင့်ရဲ့အရောင်များဘွေလည်းစိတ်အားထက်သန်ရမနေပါနဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတို့အတူတူ run ပါလိမ့်မယ်။
စက္ကူ Remove နှင့်ဖြစ်စေ (passes အကြားရှင်းလင်း) ကိုရိတ်မုန့်ပယ် squeegee သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့စက္ကူပဝါနှင့်အတူပိတ်ရိတ်မုန့်သုတ်။ သငျသညျဂရုတစိုက်ဤသို့ပြုလျှင်, သင်၏အရောင်အဘယ်သူမျှမဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပုံပျက်လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့စက္ကူအခြောက်မှ Allow ။ က curls လျှင်, သင်ပြားချပ်ချပ်အနိမ့်အပူသုံးပြီးကြောင့်မီးပူနိုင်ပါတယ်။ ငါပရင်တာစက္ကူ Distort နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
အဆိုပါ marbled စက္ကူချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အနည်းငယ်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်လိမ့်မည်။ ကသွေ့ခြောက်လေ၏တစ်ချိန်ကအစားအစာအရောင်မဟုတ်သလိုစိတ်ထားသုတ်ဆေးမစက္ကူချွတ်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အချို့လူများကတစ် fixative နှင့်အတူစကျင်ကျောက်စက္ကူကိုလေပေါ်မှာပမှကြိုက်တယ်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာရနံ့နှင့်ရောင်စုံစက္ကူလုပ်ပါလျှင်ငါဖြစ်ကောင်းစက္ကူအမွှေးအကြိုင် mask စေခြင်းငှါ, ပြုပြင်တာတွေကတည်းကစက္ကူဆက်ဆံပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဆာလ်ဖာ crystal ဟာ Make ရန်ကဘယ်လို
အနီရောင်ဂေါ်ဖီထုပ်သော pH စက္ကူ Make ရန်ကဘယ်လို
သွေးအဘို့အ Luminol Chemiluminescence စမ်းသပ်ခြင်း
အနှစ်သုံးဆယ်စစ်ပွဲ: Lutzen ၏တိုက်ပွဲ
ဂျယ်ရီရော်ဘင်ဆင်တို့က 10 ဦးအကြီးမြတ်ဆုံး Batman မျက်နှာဖုံးများ
ဘာကို Long Weekend အပေါ်လုပ်ပါရန်
အမျိုးသားကြွေးမြီသို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ် Deficit? ခြားနားချက်ကဘာလဲ?
ဒီနွေရာသီသွားရောက်မှထိပ်တန်း5က Superman ကြိတ်စက် Coaster
တစ်ဦး NFL တရားဝင်ဖြစ်လာခြင်းဖို့ Path
အဆိုပါ Moche ယဉ်ကျေးမှု - သမိုင်းမှ Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်နှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ
ကင်တပ်ကီဒါဘီစီးခြင်းအနိုင်ရရှိမှုထိပ်တန်း fo တစ်ဦးကစာရင်း
VB.NET အတွက် namespace
Kenyon ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
10 cosas Que debes ဖုံးကိုဓားရှည်မသန်စွမ်း SER exitoso con formularios del USCIS
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး: 'CCTV ရဲ့နှစ်သစ်ကူး Gala' '